Sampandraharahan’ny Fananantany Hampahafantantra ny tanim-panjakana azo amidy
Hanatanteraka varavarana misokatra ny zoma 26 jolay ho avy izao ny sampandraharahan’ny fananantany eto Antananarivo Renivohitra.
Tanim-panjakana tsy azo amidy, tanim-panjakana azo amidy, tanin’olon-tsotra vita titra, tanin’olon-tsotra tsy vita titra ary ny tany manana sata no hanaovana famelabelaran-kevitra. Maro tokoa ireo Malagasy tsy mahalala mahakasika ny lalàna momba ny famarotana tany sy ny manodidina azy. Porofon’izany ireo raharaha faharoa betsaka indrindra eo anivon`ny Fitsarana dia mahakasika ny fananan-tany. Eo ihany koa ireo dôsie maro mahakasika ny fandikan-dalàna amin’ny resaka famarotana tany… Lohahevitra mifanaraka amin’izany indrindra no hovelabelarina dia ny momba ny “Tanim-panjakana azo amidy”. Hotanterahina etsy amin’ny ivontoerana farim-piadidian’ny fananantany Antananarivo Renivohitra izay hanasana ny rehetra. Manan-danja betsaka ho antsika Malagasy tokoa ny tany ary tena ilaina ny fahafantarana mahakasika izany.